प्रधानमन्त्री ओलीलाई जब सांसदले दिएको महले काम गर्यो ! — Motivatenews.Com
प्रधानमन्त्री ओलीलाई जब सांसदले दिएको महले काम गर्यो !
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार अरु दिनभन्दा अलि फुतिर्ला देखिन्थे । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले आफ्नो फुर्तिको कारण त खुलाएनन् तर मन्त्रीहरुलाई भने कोभिड १९ सम्बन्धी लामो कोचिङनै दिए ।
उनले कोरोनाभाइरसबाट बचाउन लकडाउन सधै सम्भव नहुने भन्दै रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनेतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । एक मन्त्रीका अनुसार आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समय आफ्नो कुरा राखेका थिए भने कोरोनाबाट बच्न रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु पर्ने जोड दिएका थिए ।
त्यसका लागि घरेलु विधि प्रभावकारी हुने भन्दै ओलीले मह, अदुवा, बेसार पानी, लसुनका साथै विभिन्न जडिबुटी मिलाएर खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक हुने भन्दै यसतर्फ नागरिकलाई प्रेरित गर्ने बताएका थिए ।
केही दिनअघि मुस्ताङका सांसद प्रेमकुमार तुलाचनले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हिमाली मह दिएको बताएका थिए । त्यही महले प्रधानमन्त्रीमा स्फूती ल्याएको र घरेलु औषधिले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्न प्रेरित गरेको हुनेसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
उनले नेपालीको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता यसैपनि बलियो रहेको भन्दै यस्तो कुरामा जोड दिन सकिए कोरोनाबाट बच्न धेरै हदसम्म सहयोगी हुने बताएका थिए ।
उनले बैठकमा मन्त्रीहरुलाई समेत जडिबुटीसमेत गरेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सुझाएका थिए । बैठकपछि ती मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रशिक्षणात्मक शैलीमा कोरोनाबाट बच्ने उपायबारे आफ्नो धारणा राख्नुभयो । हामीले सुन्यो ।’
उनका अनुसार बैठकमा लामो समय ओलीले कोरोनाको जोखिम, सरकारले गरेको कामकारबाही र नागरिकलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले जटिबुटी र आयुर्वेदका औषधि निकै फाइदाजनक हुने पटक पटक दोहोर्याउँदै यसको प्रयोगमा नागरिकलाई प्रेरित गर्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले पनि नागरिकको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरे ।
‘क्वारेन्टाइनमा रहँदा होस् या बाहिर रहँदा होस् हामी सबै नागरिकहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरु बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि हाम्रा जडिबुटीजन्य अथवा औषधिजन्य जतिपनि बस्तुहरु छन्, त्यसमा अलिकति हामीले जनचेतना बढाउने, उपभोग गर्ने बानी पनि विकास गर्ने, व्यायाम गर्ने बानी विकास गर्ने । सरकारी निकाय जसले यस्ता औषधि उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने ।’
उनले नागरिकको जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नलाई जनचेतना फैलाउने तथा यो सबै काम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकसमाजका प्रतिनिधिसम्म लाग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए ।